May 5, 2016 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၆)
Posted on May 5, 2016 (March 11, 2020) by bgoper
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစီရင်ခံစာ ၁။ နိဒါန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများစွာဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်လာသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။နိုင်ငံတော်အတွင်း ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားညီအကို မောင်နှမများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအား ၁၉၄၇ပင်လုံညီလာခံကြီးက သက်သေထူခဲ့သော်လည်း လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုပျက်ပြားကာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ယနေ့ထိတိုင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများလက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုများ၏ အားနည်းချက်များကို သင်ခန်းစာယူ၍ ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနအသစ်တစ်ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကို ကြိုဆိုပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းသကဲ့သို့ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တွင် တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) (၁၀.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် အဆိုတစ်ရပ်တင်သွင်းခြင်းကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ […]
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ
Posted on May 5, 2016 (March 13, 2020) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ နိဒါန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ အဆို(သို့မဟုတ်) အစီရင်ခံစာ၊ ဖြေကြားသော အဖြေများ၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စနစ်တကျ စိစစ်ရန်၊ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်းရှိ/မရှိ မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်သည့်အခြေအနေထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ထိရောက်မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ပါရန်အတွက် ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန် အောက်ပါအစီရင်ခံစာကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကတိကဝတ်အာမခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ်(က)(ခ)(ဂ)အရ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၆၂ နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့် (ခ)အရလည်းကောင်း၊ […]
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် ​မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၁၆)
Posted on May 5, 2016 (March 12, 2020) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် ​မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၁၆) နိဒါန်း ၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ၇၀%ခန့်သည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြသည့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သမရိုးကျစိုက်ပျိုးရေးမှ ခေတ်မီစက်မှုလယ်ယာသို့ အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းရမည်ဖြစ်သလို အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ဘက်စုံကဏ္ဍစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………. […]
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၆)
Posted on May 5, 2016 (March 16, 2020) by bgoper
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၆) နိဒါန်း ၁။ ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီကို ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ်(က)(ခ)(ဂ)နှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၆၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က)နှင့် (ခ)အရ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လ၁၀ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂။ ဤကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လ၁၆ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လ၁၇ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလ၇ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………………………. […]
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာ ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ